Horyaalada Yurub iyo Ingariiska - BBC News Somali
Horyaalada Yurub iyo Ingariiska
18 Maarso 2015
Image caption Ciyaartii dhex martay Monaco iyo Arsenal
Koobka horyaalada Yurub ee Uefa Champions League-ga, Kooxda Arsenal ayaa waxa ay u safartay Monaco si ay kooxdaasi ula dheesho lugta labaad ee kala baxa horyaalada Yurub.
Lugtii hore ee ciyaartan ayaa Arsenal garoonkeeda Emirates waxaa ciyaar layaab leh kaga badisay kooxda Monaco oo 3-1 ku suuldaartay.
Arsenal ayaa ciyaartii xalay waxa ay 2-0 kaga badisay Monaco, balse Arsanel ayaa ka hartay koobka horyaalada Yurub ee Uefa Champions League-ga, sababtuna waxa ay tahay kooxda Arsanel ayaa laga doonayay in ay dhaliyaan sedex gool, maadaama ay joogeen guriga Monaco.
Tababaraha kooxda Arsenal Wenger, ayaa sheegay in kooxda Monaco aysan u qalmin guusha ay gaartay, Arsenal Wenger ayaa sanadihii 1987-dii ilaa 1994-tii u ahaa tababare kooxda Monaco.
Ciyaarta kalana waxa ay dhex martay kooxaha Atletico Madrid iyo Bayern Leverkusen, ciyaarta ayaa ku dhamaatay bar-bar dhac, ugu dambayntii waxaa loo dhigay rigoorooyin waxaana 1-0 ku badisay kooxda Atl Madrid.
Lugtii horena waxaa 1-0 ku badisay kooxda Bayern Leverkusen.
Horyaalka Ingariiskana Kooxda Liverpool ayaa guul muhiim ah ka gaartay kulankii ay la yeelatay kooxda Swansea City, kaddib markii ay 1-0 ku dubatay kooxdaasi.
Tababaraha kooxdaasi Liverpool, Brendan Rodgers, ayaa sheegay in kooxdiisa ay soo bandhigtay ciyaar wanaagsan taasoo u suuragalin karto in horyaalka Ingiriiska ee haatan socda ay ka galaan kaalinta labaad.
Guusha Liverpool ayaa aheyd mida shanaad ee isku xigta oo ay ka gaaraan horyaalka Ingiriiska, iyadoo goolka kaliya ee ciyaartana uu dhaliyay laacibkooda khadka dhexe Jordan Herderson.
Kooxda Liverpool ayaa ku jirta kaalinta shanaad ee shaxda kala horeynta horyaalka Ingiriiska, iyadoo horyaalka ay ka harsan tahay 9 kulan oo kaliya ayaa kooxda ku jirta kaalinta labaad ee Manchester City waxa ay Liverpool ka horeysaa 4 dhibcood oo kaliya.
Manchester City ayaa Sabtidii waxaa 1-0 uga badisay kooxda Burnley oo la daalaa dhacayso sidii ay uga badbaadi laheyd inay ka mid noqoto kooxaha ku biiraya tartanka heerka labaad ee Ingiriiska.
Image caption Tababare Dick Advocaat
Sunderland ayaa iyagana waxa ay u magacaaween Dick Advocaat, inuu inta ka dhiman xilli ciyaareedkan uu u noqdo tababarahooda cusub ee kooxdaasi.
Dick Advocaat oo ahaa tababarahii hore ee xulka Netherland ayaa xilkan qabanaya maalin un kaddib markii kooxda Sunderland ay ceyrisay tababarahoodii Gus Poyet.
Xilli kooxdan lagu naanayso Yaanyuuraha madmadow ay hal dhibic oo kaliya ka sarreysa kooxaha ugu hooseeyo horyaalka.
Tababare Poyet ayaa xilkaasi laga qaaday kaddib markii uu hal kulan un uu guulaystay 12 kulan oo ay kooxdiisa dheeshay, taasi oo ka dhigtay in kooxda Sunderland ay gasho kaalinta 17-aad ee shaxda kala horreynta horyaalka Ingiriiska.
Ciyaartii ugu dambeysay ee uu Sunderland layliyo Poyet waxaa Sunderland dhulka ku jiiday oo afar iyo ebar kaga badisay kooxda uu loolanka adag kala dhaxeeyo ee Aston Villa.
Tababaraha cusub ee kooxda Sunderland-na waxa uu shaqadiisa ka bilaabayaa ciyaarta ay kooxda axada soo socota la dheeli doonaan kooxda West Ham.
Ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxdaasi Adam Johnson, ayaa dib u eegis lagu samaynayaa ciyaar ka fadhiisinta lagu sameeyay.
Ciyaaryahankan da’diisu ay tahay 27-jir ee heerka caalami ah ayaa loo kordhiyay damaanaddii lagu sii daayay, arrintaasna waxa ay dambaysay markii loo xiray tuhun ah in uu galmo la sameeyay gabar jirta 15-sano.
Ciyaaryahankan oo horay ugu dheeli jiray kooxda Manchester City ayaa la xiray 2-dii March, waxaana su’aalo lagu weydiiyay xarun booliska uu leeyahay oo u dhow deegaanka uu deggan yahay ee Durham.
Isla markiiba kooxdiisu waa ay ganaaxday, markaa wixii ka dambeeyayna uma uusan ciyaarin kooxdiisa Sunderland.